गणितको ‘फेक न्यूज’
दिनेश गौतम काठमाडाैं, ७ फागुन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रम्प २०७६ जेठमा बेलायत भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणका क्रममा बेलायतमा ट्रम्पविरुद्ध लाखौँले विरोध प्रदर्शन गरे भन्ने समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरे ।
लगत्तै ट्रम्पले ‘फेक न्यूज’ भन्दै ट्वीट गरे । मिडियाप्रति आक्रामक भएका ट्रम्पले बीबीसी, सीएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स लगायतका मिडियालाई ‘फेक मिडिया’को उपाधिसमेत दिए ।
फेक मिडियाको उपाधि दिएपछि ट्रम्प समाजिक सञ्जालमा ट्रोलका पात्र बने । केही समय ‘फेक न्यूज’ चर्चामा रह्यो ।
अमेरिकामा मात्र होइन, नेपालमा पनि समय समयमा फेक न्यूजले बजार तताएको पाइन्छ ।
सत्यतथ्य को हो ? सम्बन्धित पक्षसम्म नपुगी सुनेको, कसैले भनेको आधारमा र पूरा विज्ञप्तिसमेत नपढी समाचार लेख्दा नेपाली मिडियामा पनि ‘फेक न्यूज’ प्रकाशन, प्रसारण भएका छन् ।
यसका कारण पछिल्लो समय मिडियाको जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
सोमबार बेलुका कक्षा ९–१० बाट अतिरिक्त गणित विषय हटाइयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र परिचर्चा भयो यसबारेमा ।
गणितसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमाथि खनिन थाले । विरोध र आलोचनाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको थियो । मंगलबार केही मिडियाले समेत कक्षा ९ र १० बाट ऐच्छिक विषय गणित हटाइयो भनेर लेख्न भ्याए ।
अनि फेसबुक म्यासेन्जरमा ‘कक्षा ९ र १० मा अतिरिक्त गणित विषय हटाइएछ नि !’ भन्ने म्यासेज र लिङ्क आउन थाल्यो ।
सत्यतथ्य के हो बुझ्न मंगलबार बिहानै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईलाई फोन गरेँ ।
९ र १० को ऐच्छिक गणित विषय हटाएको हो ? प्रश्न पूरा नगर्दै उनले भने, ‘फेक न्यूज’ हो, त्यस्ता खबरको पछि नलाग्नुहोस् ।’
त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्पको ‘फेक न्यूज’ दिमागमा क्लिक भयो ।
त्यतिमै चित्त बुझेन अनि हामी पठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर पुग्यौँ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पुग्दा निर्देशक भट्टराई २ पाना कागज हातमा बोकेर यताउति गर्दै थिए ।
‘के भयो सर ?’, हामीले प्रश्न गर्‍यौँ ।
‘मिडियाले फेक न्यूज लेखेछन् । फोन आएर हैरान भयो । त्यसैको ध्यानकर्षण पत्र हो । नेट नभएकाले अपलोड गर्न मिलेन’, निर्देशक भट्टराई तनावमा देखिन्थे ।
उनको मोबाइलमा घण्टी बजिरहेको थियो ।
मिडिया र सरोकारवाला निकायको फोन उठाएर उत्तर दिन उनलाई भ्याइनभ्याई भएपछि ध्यानाकर्षण पत्र निकाल्न उनी बाध्य भएका रहेछन् ।
अर्को कोठामा थिइन् पाठ्यक्रम अधिकृत चिनाकुमारी निरौला । उनकै नामबाट निकालिएको विज्ञप्तिका कारण फेक न्यूज बनेको थियो । उनको मोबाइलमा पनि घण्टी बजिरहेको छ । फोन उठाएर ‘फेक न्यूज हो, सत्य के हो शिलापत्रमा हेर्नुस् त !’, उनी उत्तर दिँदै थिइन् । तनावमा पनि देखिन्थिन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेल, निर्देशक भट्टराई र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति पनि त्यहीँ थिए ।
महानिर्देशक पौडेल भन्दै थिए, ‘एक पटक सोधेर त लेख्नु पत्रकारले !’
उनी पत्रकारहरूलाई व्यंग्य गरिरहेका थिए ।
नगरून् पनि किन ? जब आफूले नेतृत्व गरेको कार्यालयको फेक न्यूजले बजार तताएको छ । स्कुल, विद्यार्थी र सरोकारवाला निकायबाट कार्यालयमा फोन आएर प्रष्टीकरण दिनुपरेको छ ।
गत ९ पुसमा पाठ्यक्रम अधिकृत चिनाकुमारी निरौलाले कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गरिएको र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने सूचना निकालेकी थिइन् । उक्त सूचनामा ऐच्छिक गणित विषय समावेश थिएन । सूचना निकालेको झण्डै २ महिनापछि समाचार आयो– अतिरिक्त गणित विषय हटाइयो भनेर ।
तर, ऐच्छिक विषयबाट गणित हटाइएको थिएन । गणित विषय यसअघि नै परिमार्जन भएर विद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा स्पष्ट रूपमा ऐच्छिक गणित विषय उल्लेख गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई उपेक्षा गरियो भनेर गणितविज्ञहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । कक्षा ९ र १० मा पनि गणित हटाइयो भनेर समाचार र समाजिक सञ्जालमा आएपछि विज्ञहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमाथि खनिए । आगोमा घीउ थपे बराबर भयो ।
तर, त्यो समाचार झूट सावित भयो । समाचार लेख्नेहरूले डिलिट गरे । कतिले समाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस पनि हटाए ।
यस घटनासँगै गणितसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू नै फेक समाचार बनाउन उद्दत त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय हटाइयो भनेर स्वयम् गणित विज्ञहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
कतै विज्ञहरूले नै नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप अध्ययन नगरेको त होइन ? विज्ञहरूले बोलेको र भनेको आधारमा ‘मेन स्ट्रिम’ मिडियाले समेत गणित हाटाइयो भनेर हेडलाइन राखेर समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेका छन् ।
तर, गणित विषय ११ र १२ मा हटाइएको छैन । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप २०७६ को अनुसूची २ मा ११ र १२ का ऐच्छिक विषय समावेश गरिएको छ । ऐच्छिकको चौथो पत्रको पहिलो नम्बरमा गणित विषय रहेको छ ।
‘अनि विज्ञहरूले गणित विषय हटाइयो भनेर बोल्न मिल्छ ? त्यसैको आधारमा पत्रकारले कहिलेसम्म फेक समाचार लेखिरहने ?’, एक कर्मचारीको प्रतिप्रश्न छ ।
कक्षा ११ र १२ मा १ सय ९ वटा ऐच्छिक विषय छन् । यदि ती सबै विषयका विज्ञहरूले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे भने के हुन्छ ?
गणित उपेक्षामा गरियो भन्ने विज्ञहरूको तर्क पनि जायज होला । गणित विज्ञानको मुटु हो । विज्ञानको भाषा नै गणित हो । गणितलाई उपेक्षा गरिनु पनि हुँदैन ।
तर, गणित हटाइयो भनेर अनर्गल प्रचार त गरिएको छैन ?
अहिलेको पाठ्यक्रम विद्यार्थीको रुचिअनुसारका विषय विद्यार्थीले पढ्न पाउने गरी बनाइएको दाबी गरिएको छ । ११ र १२ मा साइन्स पढ्नेका लागि गणित अनिवार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
कक्षा ११ मा अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन विषय अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १२ मा नेपाली, अंग्रेजी र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ ।
ऐच्छिकका ४ वटा समूह छन् । ४ वटा समूहमध्येबाट विद्यार्थीले कुनै ३ वटा समूहबाट एक–एक वटा विषय पढ्न सक्छन् । र, विद्यार्थीले पढ्न चाहेका चौथो समूहबाट पनि एउटा विषय पढ्न सक्छन् । तर, चौथो विषय विद्यार्थीले पढ्नै पर्छ भन्ने छैन ।
चौथो विषय विद्यार्थीले नपढ्ने र कलेजहरूले नपढाउने हो कि भन्ने डर गणित विज्ञहरूलाई परेको देखिन्छ । त्यसको असर गणितलाई पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।
विशेषतः बायोलोजी समूहका विद्यार्थीले गणित पढेनन् भने उच्च शिक्षामा एमबीबीएसबाहेक अरू पढ्न नपाउने गणित विज्ञहरू बताउँछन् । कृषि, वन, सीएसआईटी र त्रिविबाहेकका अन्य विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङका विषय बायोलोजी समूहका विद्यार्थीले पढ्न नपाउने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रश्न उठेकाे छ, यदि गणितमाथि अन्याय भएको हो भने सराेकारवाला अहिलेसम्म किन कानुनी उपचारमा नगई बसेको ? संसदीय समितिमा यो विषयमा किन लगिँदैन ?
नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार किताब लेखनको कामसमेत सकिएको अवस्थामा अबकाे बहस गणितलाई थप प्रभावकारी बनाउनमा केन्द्रित पाे गर्ने कि ?
सम्बन्धित सामग्री :
कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यपुस्तक, यस्ता छन् विषय
कक्षा ९ र १० मा गणित हटाएका छैनौँ: पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
गणितका डाक्टर, जसले झलनाथदेखि बाबुरामसम्मलाई पढाए
भरिया शिक्षकले पाठ्यक्रमलाई हाउगुजी बनाए
कक्षा ११ र १२ मा गणित नपढ्दा के हुन्छ ?
गणितमाथि उपेक्षा किन ?
कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम विवादमा : विज्ञ भन्छन्, ‘पुरानै ढर्राको’
माध्यमिक शिक्षा : नयाँ पिँढीको नयाँ पाठ्यक्रम
के हो ‘स्टिम’ एजुकेसन ? कसले पढ्ने ?
गैरसंवैधानिक र अपरिपक्व शिक्षा नीति
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ७, २०७६, ०१:४९:००
कोरोना, सतर्कता र अफवाह
सरकार ! रेमिट्यान्स चल्ने तर देशमा आउन नपाउने ?
हेल्लो ! दिदीलाई अस्पतालले भर्ना गरेन है !
अस्पतालले थाल्याे फोनबाटै काेराेनाकाे उपचार
किन आवश्यक छ अनलाइन कक्षा ?
कोरोना कहर :३ दिन हिँडेर घर पुगेपछि ...
सरकार ! कोरोनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्न मिल्छ ?
मध्यम वर्गीय परिवारलाई राहत प्याकेज खोई ?